Ronaldo: macquul ma ahan ganaaxa la igu soo rogay - BBC News Somali
Ronaldo: macquul ma ahan ganaaxa la igu soo rogay
Image caption Xidiga kubadda cagta ee kooxda Real Madrid, Cristiano Ronald
Xidiga kubadda cagta ee kooxda Real Madrid, Cristiano Ronald oo ka hadlay go'aanka maxkmadda dalka Spain ee dhanka ciyaaraha ay kaga ganaaxday shanta ciyaarood ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan macquul aheyn.
32 jirkan ayaa oo u dhashay dalka Boortaqiiska ayaa intaa ku daray in wixii horay u dhacay ay ahayeen caddaalad darro, haatan na go'aanka maxkamadda uu yahay mid kaa lamid ah.
Maxkamada ayaa wakaalada wararka ee AFP u sheegtay inay ku gacan sayrtay racfaan uu Ronaldo doonayay in uu ka qaato go'aankaasi.
Ronaldo ayaa lagu eedeeyay in uu riixay garsoorihii dhex-dhexaadinayay ciyaar dheexmartay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Ronaldo waxaa looga ganaaxay 1 ciyaar labadii kaar ee jaallaha ahaa ee loo taagay, iyadoo 4-ta kulan ee kalana looga ganaaxay maddaama la sheegay in uu ku xadgudbay garsoore Ricardo De Burgos.
Ronald ayaa waxaa Durba ba seegay laba ciyaar oo kamid ah shanta ciyaar ee la ganaaxay, balse horyaalka champions-ka ee qaarad Yurub ayaa la sheegay in aysan qeyb ka aheyn ganaaxa la saaray Ronald.
Tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ciyaarta kaddib sheegay in uu aad uga xanaaqay ciyaarta laga joojiyay Ronaldo, wuxuuna sheegay inay eegi doonaan tallabada ay qaadayaan si ay ugu suurta gasho in maalinta Arbacada ah uu uga qeyb qaato ciyaarta.
Waa markii 10naad oo Ronaldo la siiyo kaarka casaanka ah, tan iyo markii uu bilaabay xirfaddiisan.